काठमाडौं । सरकारले कला क्षेत्र र कलाकारहरुको श्रीवृद्धिमा सहयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । देखावटी रुपमा हुने सानातिना काम बाहेक अरु हुन नसकेको कलाकारहरुले गुनासो गर्ने गर्छन् । अन्य क्षेत्रमा राम्रै बजेट छुट्याए पनि कला क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । हालै सरकारले ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ अवार्ड वितरण गरेको थियो, तर, विवाद मुक्त हुन सकेन । राज्यस्तरबाट हुने अवार्ड वितरण विवादमा पर्नु दुःखद् कुरा हो । अवार्ड वितरण समारोहमा वरिष्ठ कलाकारहरु अपमानित हुनु दुःखद् र खेदजनक कुरा हो । अझ राष्ट्रको अभिभावक अर्थात राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवनमै भएको कार्यक्रममा कलाकारहरु अपमानित भएका हुन् । यसरी अपमानित भएका कलाकार मध्येका एक हुने सरोज खनाल ।
अवार्ड वितरण कार्यक्रममा नाच्न तथा आफ्नो कला देखाउन गएका कलाकारहरुलाई बस्ने ठाउँको अभाव थियो । सानो एउटा कोठामा ४० जना कलाकार राखेपछि बस्ने ठाउँ नहुँदा कलाकार सरोज खनाल ट्वाइलेटमा गएर बस्नु परेको थियो । उनले आफू ट्वाइलेटमा गएर बस्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित अवार्ड वितरणको विशेष कार्यक्रममा कलाकारहरुलाई कस्तो ठाउँमा राखिएको थियो ? किन ट्वाइलेटमा गएर बस्नु परेको हो ? लगायतका विषयमा कलाकार सरोज खनालसँग क्यानडा नेपालले कुराकानी गरेको छ । सो क्रममा सानोभन्दा सानो कोठामा ४० जना कलाकार राखेको, पिउने पानीको समेत व्यवस्था नभएको उनले बताए । अरु के के भए ? यसबारे यो भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्: